जीवन विकासको आइपिओ बाँडफाँट : ६९ हजारको आवेदन किन भयो रद्द ? | शुभयुग
जीवन विकासको आइपिओ बाँडफाँट : ६९ हजारको आवेदन किन भयो रद्द ?
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७८ अषाढ २४, बिहिबार (१२ महिना अघि)
६५३ पाठक संख्या
२४ असार,काठमाण्डौ – जीवन विकास लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको आइपिओ बाँडफाँट गरेको छ ।
बुधबार बिहान बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले शेयरको बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले गत असार ११ देखि १५ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गरेको थियो । संस्थाको आइपिओमा २० लाख ८७ हजार ३१७ जनाले आवेदन दिएका थिए तर आवेदन दिएकामध्ये ६९ हजार ९ जनाको आवेदन भने रद्द भएको क्यापिटलले जनाएको छ ।
६९ हजार ९ जनाको आवेदनमध्ये केहीको आवेदन अयोग्य भएको र केहीको आवेदन रद्द भएको क्यापिटलले जनाएको हो । त्यस्तै आवेदन दिएका मध्येबाट २० लाख १८ हजार ३०८ जना आवेदक योग्य रहेका छन् । मागभन्दा बढीको आवेदन परेपछि क्यापिटलले योग्य रहेका उक्त आवेदकलाई गोलाप्रथामा सहभागी गराई शेयर बाँडफाँट गरेको थियो । सोअनुसार गोलाप्रथाबाट एक लाख ८४ हजार ८०१ जनाले १० कित्ता शेयर पाएका छन् भने पाँचजनाले ११ कित्ता शेयर पाएका छन् । आवेदन दिएकामध्ये १९ लाख दुई हजार ५१६ आवेदकले शेयर पाएनन् ।
कम्पनीले रु एक सय अङ्कित दरका १९ लाख ७७ हजार ३०० कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला गरेको थियो । त्यसमध्ये जारी पूँजीको पाँच प्रतिशत अर्थात् ३० हजार ४२० कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि र कूल निष्कासनको पाँच प्रतिशत अर्थात् ९८ हजार ८६५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको थियो ।
आइपिओको नतिजा मेरोशेयर, सिडिएसले आइपिओ नतिजाका लागि तयार पारेको वेबसाइट र बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।